DFS oo digniin culus u dirtay Ilaalada Hoteelada ku yaalla Muqdisho (Ujeedka) - Caasimada Online
Home Warar DFS oo digniin culus u dirtay Ilaalada Hoteelada ku yaalla Muqdisho (Ujeedka)
DFS oo digniin culus u dirtay Ilaalada Hoteelada ku yaalla Muqdisho (Ujeedka)
Muqdisho (Caasimada Online) – Dowlada Federaalka Somalia, ayaa digniin kasoo saartay in Ilaalada Hoteelada Muqdisho ay qaataan misna ku labistaan Dareeska Ciidamada Xooga.
Maxamed Aadan Axmed Taliyaha Ciidamada Xoogga DFS ayaa sheegay in talaabo adag ay ka qaadi doonaan Ilaalada Hoteelada ee ku labisan Dareeska Ciidamada.
Waxa uu sheegay in Ilaaladii lagu arkaa Dareeska Ciidamada Xooga ay muteysan doonaan Ciqaab, waxa uuna ku baaqay in taa bedelkeeda ay qaatan Dareeska loogu tallo galay.
Ilaalada Hoteelada Muqdisho ayuu sheegay in badankooda ay qaatan Dareeska Ciidamada kuwaa oo aan ka mid aheyn Ciidamada Dowlada gaar ahaan kuwa Xooga, balse ay yihiin kuwo ku labista oo kaliya.
”Diidnay in Ilaalada Hoteelada ay ku labistaan Dareeska Ciidamada Xooga waxaan ku ciqaabi doonaa waxa uu muteystay haddii aan gacanta ku dhigno Ilaalo ka tirsan Hoteelada oo ku labisan Dareeska Militeriga”
Waxaa uu sheegay cidii lagu arko iyadoo dareeska Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ku ilaalinaysa Hoteel in laga qaadi doono tilaabo sharciga waafaqsan.
Waxaa uu xusay in ciidamada dowladda Soomaaliya in aysan ka tirsaney ciidamada Ilaalada Hoteelada iyo sidoo kale Hay’addaha sida gaarka ah loo leeyahay.
Haddalka Taliyaha Ciidamada Xooga, ayaa imaanaya kadib markii Taliyayaasha Ciidamada lagu amray inay jawaab ka keenaan dilalka ka dhaca Muqdisho, iyadoo sidoo kale amar lagu bixiyay in magaalada Muqdisho laga saaro Ciidamada Militeriga.